सेरोफेरो : मोबाइल खोस्दै उनले भने, "खिच्न पाइदैन ।"
‘मैले यहाँ कुनै सूचना पनि छैन, कुनै बोर्ड पनि लगाएको छैन । तपाइहरू भट्टाभट बाइक उठाउँदै हुनुहुन्छ । तपाइहरूलाई सोझै बाइक उठाउने निर्देशन आएको हो ?’ भनेर सोध्न खोज्दैथेँ । उनले मेरो मोबाइल खोसिहालेँ । एकैछिन बिबाद भयो । उनले यसरी खिच्न पाइन्छ भन्दै उल्टै मलाई पो थर्काउन थालेँ । आफू पत्रकार भएको कुरा बताएपछि उनले ‘सबैठाउँमा सूचना गरेको छ । पत्रकारलाई नै थाहा छैन ? यसरी खिच्न पाइन्छ ?’ भन्दै झोक्किए । त्यहाँ भएका एक ट्राफिकले ‘पत्रकार भए क्यामेराले पो खिच्नु पर्छ’ भन्ने जस्तो जवाफ दिए ।
सार्वजनिक स्थलमा भएका क्रियाक्लाप । अझ त्यो भन्दा पनि जनसरोकारको विषयलाई हामीले रेकर्ड गर्न किन नपाउने ? के यो दादागिरी भएन ? बिबाद बढ्दै गयो । वरपर मान्छे झुम्मिन थाले । ती खटिएका नगर प्रहरीले मेरो मोबाइल दरबार मार्ग प्रहरीलाई बुझाउने भन्दै लिएर हिडे ।
मोबाइल खोस्ने नगरप्रहरी
पहिलो लाइनमा पार्किङ गरेकाले मेरो बाइक त सुरक्षित नै थियो । तर यहाँ नियम बनाउनेहरू नै नियम मिच्ने काम गर्दैछन् । मनले मान्दैन्थ्यो । भिडियो पनि खिच्न नपाउने ? प्रश्न पनि सोध्न नपाउने ? मनमा आक्रोश झनै बढ्दै थियो ।
म पनि के के हुन्छ हेरौं भन्दै मेरो मोबाइल लिएर हिड्ने नगरप्रहरीकैपछि लागेँ । ती नगर प्रहरीले नारायणहिटी अघिल्तिर उभिएका एक ट्राफिक प्रहरीलाई सलाम ठोके अनि केही भनेको जस्तो गरे । मोबाइल उनकै हातमा दिएर फर्के ।
न बिराउनु न डराउनु । म ट्राफिक प्रहरी नजिकै पुगेँ । उनी दरबारमार्ग ट्राफिक प्रहरीका सिताराम हाच्छेथु रहेछन्, उनको पोशाकमा नाम प्रष्टै देखिन्थ्यो । नजिक पुग्ने बित्तकै उनले सोझै हात मिलाए । उनको अनपेक्षित व्यवहारले मेरो रिसको पारो स्वाट्टै तल झर्यो । अझ् मेरो हातमा मोबाइल दिँदै सोधेँ, ‘खास के भएको हो ?’
मैले छोटकरीमा कुरा टुंगाए । ती नगर प्रहरीको नाम पनि सोधेँ । उनले भने, ‘खै थाहा भएन । छाड्दिनुस् यिनीहरू यस्तै हुन ।’
मन दिक्क भयो । अब हामीले कहिले सम्म सबै कुरा यस्तै हुन भनेर छाड्ने होला ?
भनेपछि सिताराम हाछेथुसँग सरको राम्रो चिनजान रहेछ ! हात पनि मिलाएछन् । Anyway very interestingly boring blog. Never Mind.
Bhabasagar Ghimire January 19, 2015 at 7:18 AM
कसरी चिनजान हुनु सर । त्यो पहिलो भेट थियो । सबै कुरा अचम्मैसँग भए ।